Altima – Nissan Myanmar
REDEFINE YOUR STATURE
POWER 180	PS
Trunk Capacity (L) 488
2.5L AT SL
QR25DE engine 4-cyl, in-line, 16 valve, 180PS, torque 243Nm
BOSE premium Audio System with subwoofers and ampliﬁer
မည်သည့်နေရာသို့ သင်သွားသည်ဖြစ်စေယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် ယူဆောင်သွားနိုင်သည့် ကားတစီးဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်အချက်ပြမီးများနှင့် သပ်ရပ်ကျနစွာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည့် ကားအပြင်ပိုင်းသည် တွေ့မြင်ရသူတိုင်းအားရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ခံစားချက်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။
Projector Xenon ရှေ့မီး
Aside to its distinct style, the vehicle is streamlined in its automatically adjustable xenon projector lens headlamps, it improves driving vision.
Altima အပြင်ပိုင်းအသွင်အပြင်သည် ပေါ်လွင်ထင်ရှားသည့် ဒီဇိုင်းဖန်တီးမှုဖြစ်သည့်အပြင် လေထုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာခွင်းဖောက်မောင်းနှင်နိုင်သည့် ပြေပြစ်သည့်တည်ဆောက်ပုံဖြစ်ပြီးအလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်သည့် xenon ပရောဂျက်တာရှေ့မီးသည် မောင်းနှင်မှုမြင်ကွင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
ခရိုမီယမ်သတ္တုငွေရောင်ဖြင့် အနားသတ်ထားသည့် နစ်ဆန်း၏ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် ရုပ်လုံးကြွဘားတန်းသည် ကား၏ ခန့်ညားသားနားမှုကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးသည်။
ခေတ်မှီမှု၏သင်္ကေတဖြစ်ပြီးဇိမ်ခံကားတစီး၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာလည်းဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုကောင်းမွန်၍ နေရောင်ခြည်တောက်ပသည့် နေ့တနေ့တွင် ပျော်ရွှင်ဖွယ်မောင်းနှင်မှု အတွေ့အကြုံကိုသက်ဝင်ခံစားကြည့်လိုက်ပါ။
ကား၏စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အပြောမဟုတ်ဘဲအလုပ်ကသက်သေပြပါလိမ့်မည်။ Altima အသွင်သစ်သည် စွမ်းအားနှင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိမှုတို့၏ ပြယုဂ်ဖြစ်သည်။
အသွင်သစ် QR25DE Twin CVTC အင်ဂျင်
နောက်ဆုံးပေါ် အင်ဂျင်သည် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းသည်။ လောင်စာဝင်ရာ နှင့် အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့ထွက်ရာအစို့ရှင်များကိုထိန်းချုပ်ပေးသည့် နှစ်ထပ် CVTC စနစ်သည် သန့်ရှင်းသည့် အင်ဂျင်ပေါက်ကွဲအားကိုထုတ်လုပ်ပေးပြီးဆီစားလည်းသက်သာစေသည်။
မျိုးဆက်သစ် Xtronic CVT
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးတုံ့ပြန်မှုအားကောင်းသည့် ဂီယာအုံစက်ပိုင်းဖြစ်ပြီး ပြင်ညီမောင်းနှင်မှုများတွင် အရှိန်အဟုန်မြင့်မြင့်မားမားနှင့် ညက်ညောစွာမောင်းနှင်နိုင်စေကာဆီစားလည်းပိုမိုသက်သာစေသည်။
နေရာအနှံ့အပြားသို့ ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကားအောက်ခံကိုယ်ထည် ထိန်းချုပ်စနစ်
မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်နှင့် ဝင်ရိုးကိုဆက်သွယ်ပေးသည့် ကားအောက်ပိုင်းဆိုင်းထိန်းစနစ်ကိုတည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်လုပ်ဆောင်ပေးပြီးသက်သောင့်သက်သာနှင့် ပိုမိုညက်ညောသည့် စီးနင်းမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။
မော်တော်ယာဉ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဆိုင်ရာနည်းပညာပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မော်တော်ယာဉ်သည် လိုက်ပါစီးနင်းသူများကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရမည်ဟူသောအယူအဆပေါ်တွင်အခြေခံ၍ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသောနည်းပညာများကိုအသုံးပြုထားသည်။
SRS လေအိတ် ၆ ခု
ယာဉ်အားဘေးဖက်အခြမ်းမှ ထိခိုက်မှုများတွင် ယာဉ်မောင်းသူနှင့် ရှေ့ခန်းတွင်စီးနင်းလိုက်ပါသူတို့အပေါ် ထိခိုက်မှုကိုလျော့ချပေးရန် တီထွင်ထားသည့် နည်းပညာဖြစ်သည်။ ကားရှေ့ဖက်ရှိလေအိတ်၂ခုနှင့် ဘေးဖက်ရှိလေအိတ်များသည် ယာဉ်မောင်းသူနှင့် ခရီးသည်များအားအကာအကွယ်ပေးသည်။
ရုတ်တရက် အထိတ်တလန့်ဖြင့် ဘရိတ်အုပ်လိုက်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင် စတီယာရင်အားဆက်ထိန်းထားနိုင်ပြီးအတားအဆီးများကိုကွေ့ပတ်မောင်းနှင်နိုင်စေသည်။
မော်တော်ယာဉ် လမ်းချော်သွားခြင်းကိုအလိုအလျောက်ကာကွယ်ပေးပြီးမော်တော်ယာဉ်အားသင်သွားလိုရာလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ဆက်ရှိနေစေရန် အထောက်အပံ့ပေးသည်။
ဘီး၊ တာယာတို့၏ ကုပ်အားထိန်းချုပ်ရေးစနစ် ( TCS)
TCS စနစ်သည် VDC စနစ်နှင့် အတူတကွ အလုပ်လုပ်သည်။ ဤစနစ်သည် ရှေ့ဘီးလည်ထွက်သွားခြင်းကိုခံစားသိရှိနိုင်ပြီးထိုအခြေအနေမျိုးတွင် လောင်စာစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ကာစက်၏အရှိန်ကိုလျော့ချပေးဖြင့် မော်တော်ယာဉ်အားသင်သွားလိုရာလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ဆက်ရှိနေစေရန် အကူအညီပေးသည်။
ကားကွေ့သည့်အခါတွင် အရှိန်လျော့ကျသွားစေရန် ဘရိတ်သက်ရောက်အားကိုအလိုအလျောက်ပို့လွှတ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် မော်တော်ယာဉ် စတီယာရင်အားသင်သွားလိုရာဖက်သို့ ပိုမိုထိရောက်မှုရှိစွာထိန်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
ကားအတွင်းခန်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဇိမ်ခံအသုံးအဆောင်များသည် ကား၏အသွင်အပြင်၊ စွမ်းဆောင်ရည်တို့နှင့် ထပ်တူထပ်မျှကောင်းမွန်သည်။ အမည်းရောင်နှင့်ငွေရောင်ကိုပြေပြစ်ခံ့ညားစွာပေါင်းစည်းထားသည့် ကားအတွင်းခန်းတခုလုံးအားအသေးစိတ်တခုချင်းစီအလိုက် အကောင်းဆုံးဆိုသည့်အရာများဖြင့် သေသပ်ကျနစွာဖွဲ့စည်းထားပြီးယနေ့ခေတ်၏ မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်များစိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေမည့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးမြင့်သားရေဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ကားအတွင်းပိုင်း
အရည်အသွေးမြင့် တန်ဖိုးကြီးသားရေဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့် ကားအတွင်းပိုင်းသည် ယာဉ်မောင်းသူနှင့်ခရီးသည်များအားလုံးအတွက် နှစ်လိုဖွယ် သက်သောင့်သက်သာရှိမှုကိုပေးစွမ်းသည်။
သင်ခရီးလမ်းတလျှောက်လုံးအတွက် ဇိမ်ရှိမှုများကိုပေးစွမ်းပါလိမ့်မည်။ ခရီးလမ်းများအတွက်သင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကားမောင်းနှင်မှုကို ဆင်ပြေချောမွေ့စွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
အနေအထား ၁၀ မျိုးပြောင်းလဲနိုင်သောဆွဲအားမဲ့ ထိုင်ခုံ
အနေအထား ၈မျိုးပြောင်းနိုင်သည့် ထိုင်ခုံများဖြစ်ပြီးယာဉ်မောင်းသူအတွက် ခါးအနေအထား ၂မျိုးပြောင်းနိုင်သည့် ခါးကျောရိုးကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည့် ထိုင်ခုံပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့် ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားအချိုးအစားတွက်မဆိုအဆင်ပြေပြေထိုင်နိုင်ပြီးယာဉ်မောင်းသူအနေဖြင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမဖြစ်စေဘဲမောင်းနှင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယာဉ်မောင်းသူနှင့် ရှေ့ခန်းတွင် စီးနင်းလိုက်ပါသူတို့ အနေဖြင့် ဌင်းတို့နှစ်သက်ရာအပူချိန်ကိုကိုယ်စီထားရှိနိုင်သဖြင့် အဆင်ပြေသည်။
စပီကာများ၊ subwoofers များ၊ အသံချဲ့စက် (amplifier) များဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအခြားအသံစနစ်များနှင့်မတူကွဲပြားသည့် သောတအာရုံခံစားမှု အတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။
ယာဉ်မောင်းသူအနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအားလွယ်ကူစွာကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ယာဉ်မောင်းနှင်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
အီလက်ထရောနစ် ဟိုက်ဒြောလစ် ပါဝါ စတီယာရင်
ပြီးအသံပိုင်းဆိုင်ရာ၊ မောင်းနှင်မှု၊ Bluetooth Hand-Free နှင့် ADAD တို့အားလက်ချောင်းတချက်ဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
၅လက်မရှိ အရည်အသွေးမြင့် ရောင်စုံဖန်သားပြင်နှင့် နောက်ကြည့်ကင်မရာ
သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဖျော်ဖြေရေးအတွက် ၅လက်မရှိ အရည်အသွေးမြင့် ရောင်စုံဖန်သားပြင် နှင့် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် နောက်ကြည့်ကင်မရာတို့ပါဝင်သည်။
သော့ထုတ်စရာမလိုဘဲခလုတ်တချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ကားတံခါးအားလော့ခ်ဖွင့်နိုင်၊ လော့ခ်ချနိုင်၊ ကားနောက်ဖုံးအားဖွင့်နိုင်သည်။ အင်ဂျင်အား နည်းလမ်း၂မျိုးဖြင့် အလွယ်တကူစက်နှိုးနိုင်ပြီးအဝေးထိန်းခလုတ်ကိုနှိပ်၍ဖြစ်စေ၊ ကားအတွင်းတွင်ပါရှိသည့် Push Start ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ ဖြစ်စေကားအားစက်နှိုးနိုင်သည်။
E-GARAGE AUTO SERVICES & SPARE PARTS
No. 443, Pyay Road, In Front of Institute of Medicine (1), Kamaryut Township, Yangon.
09-421 171 767, 01-537 482,
Open Daily except Sunday, 8.30am – 5.30pm
UNITED DIAMOND MOTOR 1
No. 139, University Avenue Road, Kamaryut Township, Yangon. (Near Innya Traffic Light).
09-450 222 600, 09-450 222 700
Open Daily, 9.30am – 6pm
UNITED DIAMOND MOTOR 2
No. 4/A, Waizayandar Road, 3-Quarter, South Okkalapa Township, Yangon.
09-257 587 778, 09-257 587 779
PACIFIC ALLIANCE MOTOR
No. 90, 78th Street, Between 36th Street X 37th Street, Mahar Aung Myay Township, Mandalay.
09-777 700 361, 09-777 700 382
SHWE SAGAING MOTOR SERVICES
No. 109, Sagaing Monywar Road, Zee Chaung Quarter, Sagaing Township, Sagaing.
09-502 2605, 09-975 551 944
SHIN THANT THIT SAR
No. 141-144, Ayeyarwady Street, Between Shwe Ta Mar 3St & 4St, Thapyaegone Quarter, Zabu Thiri Township, Nay Pyi Taw.
09-404 080 123, 09-403 020 022